Out of Time (2003) မီယာမီနားက ဘန်ယန်ကီးမြို့မှာ ရှိတဲ့ ရဲဋ္ဌာနအသေးလေးရဲ့ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူ ဝှစ်လော့ခ် တစ်ယောက်က အိမ်ထောင်ရေးအဆင်‌မပြေမှုကြောင့် အန်မာရိုင်း ဟယ်ရီဆန်ဆိုတဲ့ အိမ်ထောင်ရှိအမျိုးသမီးတစ်ဦးနဲ့ ကြိတ်ပုန်းခုတ်နေသူပါ အန်မာရိုင်းမှာလည်း ခရစ် ဟယ်ရီဆန်ဆိုတဲ့တရားဝင်ယောက်ျားတစ်ယောက်ရှိပါတယ် ဝှစ်လော့ခ်တို့ ရဲဋ္ဌာနမှာလည်း မူးယစ်ဆေးဝါးအမှုကဖမ်းဆီးရမိတဲ့ ဒေါ်လာငါးသိန်းနီးပါးကိုသိမ်းထားပါတယ် ‌ဝှစ်လော့ခ်တစ်ယောက် တိတ်တိတ်ပုန်းချစ်သူ အန်မာရိုင်းရဲ့ကင်ဆာကို ကုပေးဖို‌ ငွေအလွဲသုံးစားလုပ်ရင်း ဘယ်လိုမထင်မှတ်ထားတဲ့ထောင်ချောက်ထဲ ဘယ်လိုကျသွားမလဲဆိုတာ ကြည့်ရှုလိုက်ပါ ဟယ်ရီဆန်တို့ရဲ့ သရုပ်မှန်ကရော ဘာဖြစ်မလဲ ဝှစ်လော့ခ်တစ်ယောက် သားကောင်မဖြစ်ရအောင် ဘယ်လိုကြိုးစားရုန်းထွက်သွားမလဲဆိုတာ ရှုစားလိုက်ပါFile size…(2.42GB/(1.09GB)/(531GB) Quality….Webrip 1080p / 720p / 480p Format…mp4 Duration….01:45:00 Genre...Crime / Drama / Mystery Subtitle….Myanmar Subtitle (Hardsub) Encoder….Mr. Anderson Translated by Kevin
Ginger Snaps (2000) Ginger Snaps (2000) Horror ဆို ပေါကားတွေများတဲ့ထဲမှာမှ လုံးဝပေါကားမဟုတ်တဲ့ old but gold, teen horror လေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ဂျင်ဂျာနဲ့ ဘရစ်ဂျက်က သိပ်ချစ်တဲ့ ညီအစ်မနှစ်ယောက်ပေါ့။ ဂျင်ဂျာက ၁၆ နှစ် ဘရစ်ဂျက်ကတော့ ၁၅ နှစ်။ အသက်လေးကလည်း မတိမ်းမယိမ်း၊ အကျင့်စရိုက်လည်းတူတော့ ကျောင်းမှာဆိုလည်း နှစ်ယောက် တစ်ကမ္ဘာလို ဖြစ်နေတတ်ပြီး သူတို့နဲ့ မတည့်တဲ့သူတွေလည်း ပေါမှပေါပါပဲ။ နောက်ပြီး ခေါင်းမာပြီး rebellious ဖြစ်တဲ့ ဆယ်ကျော်သက်တို့ရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း တစ်ခုခုဆို ခုတ်မယ် ထစ်မယ် ပါးပါးလှီးမယ်ပေါ့။ဒီလိုနဲ့ တစ်ရက် ဘရစ်ဂျက်ကို အနိုင်ကျင့်တဲ့ ကျောင်းသူတစ်ဦးကို ကလဲ့စားချေမယ်ဆိုပြီး အိမ်က ခိုးအထွက်မှာ အကြီးမဖြစ်သူ ဂျင်ဂျာတစ်ယောက် အမည်မသိ သတ္တဝါတစ်ကောင် ကိုက်တာ ခံလိုက်ရပါတော့တယ်။ အဲဒီသတ္တဝါကလည်း သူတို့ရပ်ကွက်မှာ သောင်းကျန်းနေတာ ကြာပြီဖြစ်ပြီး အိမ်မွေးခွေးတိုင်းလိုလိုကို ...
Bravo, My Life (2022) ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ CM ကနေ အိပ်မက်ကို အကောင်ထည်ဖော်ဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ တက်ကြွဖျတ်လတ်တဲ့ကောင်မလေးနဲ့ သူဌေးသားကောင်လေးအကြောင်းကို ဇာတ်အိမ်ကြီးကြီးနဲ့ ရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားတဲ့ အပိုင်းရှည်မိသားစုဟာသကားလေးကို တင်ဆက်သွားမှာပါဒီကားလေးမှာဆိုရင်...ဆောဒုန်ဟီးဟာ ဆင်းရဲတဲ့မိသားစုကနေပေါက်ဖွားလာတာဖြစ်ပြီး ဒီဇိုင်းနာဖြစ်ချင်တဲ့ အိပ်မက်ကို လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ တက်တက်ကြွကြွကောင်မလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ် တစ်နေ့မှာတော့ ဒုန်ဟီးဟာ သူ့တူကို သူ့ရဲ့သားအဖြစ်မွေးစားပျိုးထောင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါတယ် အဲဒီနောက် ဒုန်ဟီးတစ်ယောက် အရင်ကတည်းကပန်းခင်းလမ်းမဟုတ်တဲ့ အိပ်မက်ရှိရာဆီလျှောက်လှမ်းရာလမ်းမှာ ထပ်တိုးအခက်အခဲတွေကို ရင်ဆိုင်ကျော်လွှားရဖို့ဖြစ်လာပါတော့တယ်ဂန်ချာယောလို့အမည်ရတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ကတော့ ကုမ္ပဏီခပ်ကြီးကြီးထောင်ထားတဲ့ အဖေတစ်ယောက်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူတစ်ယောက်ပါ မိသားစုနောက်ခံအသိုင်းအဝိုင်း​တောင့်ပေမဲ့လည်း သူကြုံနေရတဲ့ ပြဿနာဟာ အစစအရာရာ အဆင်ပြေချောမွေ့တဲ့ သူ့အဖေကုမ္ပဏီမှာ အလုပ်မဝင်ချင်ဘဲ အရင်နေခဲ့ရာ U.S ကိုပဲ ပြန်သွားချင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ် သို့သော်ငြားလည်း ရွှေလင်ပန်းနဲ့မွေးလာတဲ့ သူဌေးသားလေးချာယောဟာ သူ့အဖေရဲ့ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုမပါဘဲ ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာ သဘောပေါက်လာတဲ့အခါ သူ့အဖေကုမ္ပဏီမှာ တစ်နှစ်အလုပ်လုပ်ပေးဖို့ အပေးအယူလုပ်ခဲ့ပါတယ်ကံကြမ္မာအရ အိပ်မက်နောက်လိုက်နေတဲ့ ဆောဒုန်ဟီးနဲ့ U.Sကို ပြန်ဖို့ ကုမ္ပဏီမှာ အလုပ်ဝင်လုပ်နေရတဲ့ ဂန်ချာယောတို့ ပတ်သတ်ဆက်နွယ်မိသွားချိန်မှာ သူတို့တွေရဲ့ဘဝ အိပ်မက်တွေ မိသားစုအသိုင်းအဝိုင်းတွေ ဘယ်လိုမျိုးပြောင်းလဲလှုပ်ခတ်သွားမလဲဆိုတာ ...
TMDb: 8.1/10 votes
1,2,3 Ive Season2(2022) 1,2,3 IVE Season2(2022)"You make me feel like Eleven!"IVE ရဲ့ reality show လေးဖြစ်တဲ့ 1,2,3 IVE လေး season2နဲ့အတူ ပြန်လာပါပြီ IVE ဆို‌တာ‌ကတော့ အနုပညာသက်တမ်း ၇လသာရှိသေးတဲ့ အသစ်စက်စက် 4th Gen Girl Group လေးပါပွဲဦးထွက် Eleven သီချင်းနဲ့ အရမ်းကိုပေါက်သွားခဲ့ပြီး မကြာသေးခင်က comeback လုပ်ထားတဲ့ Love Dive သီချင်းကလည်း လူငယ်တွေကြားမှာ ဟိုးလေးတကျော်ကျော်ပါIVE ကိုတော့ Jang Won Young, An Yujin, Liz, Rei, Gaeul, Leeseo ဆိုတဲ့ ကောင်မလေး၆ယောက်နဲ့ ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်ပွဲဦးထွက်ကာလက ထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ ကိုယ်ပိုင် variety show 1,2,3 IVE ဟာ ပရိသတ်အားပေးမှုများစွာရရှိခဲ့တဲ့အတွက် ...
1,2,3 Ive Season2(2022)
Golden Mask (2022) Golden Mask (2022) ===============“Love Twist"ပြီးသွားလို့ နောက်ထပ်စီးရီးရှည်သစ်ကိုမျှော်နေတဲ့ CM ပရိသတ်တွေအတွက် "Golden Mask"ဆိုတဲ့ အပိုင်း ၁၀၀ ကားသစ်ကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်...ဇာတ်လမ်းအညွှန်းYoo Soo-Yeon က သာမန်မိသားစုမှာကြီးပြင်းလာခဲ့ပေမယ့်ချမ်းသာတဲ့သူဌေးသားတစ်ယောက်နဲ့ ချစ်ကြိုက်ပြီး လက်ထပ်ခဲ့ပါတယ်။စင်ဒရဲလားဆန်ဆန်ဘဝကြောင့် လူတိုင်းရဲ့အားကျခံရပေမယ့် ခွဲခြားဆက်ဆံတဲ့ခင်ပွန်းဘက်ကအသိုင်းအဝိုင်းကြောင့် သူမဘဝက မလွယ်ကူခဲ့ပါဘူးCha Hwa-Young ကတော့ လိုအင်ဆန္ဒတွေ၊ လောဘတွေနဲ့ပြည့်နေပြီးသူမရဲ့အထက်တန်းလွှာဘဝကို ထိန်းသိမ်းဖို့ကြိုးစားနေသူဖြစ်ပါတယ်။Go Mi-Sook က ပုဂ္ဂလိကငွေချေးငှားသူဖြစ်ပြီးကိုယ်ပိုင်စားသောက်ဆိုင်ပိုင်ထားတဲ့ လူကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမတူညီတဲ့ဘဝအခြေအနေတွေပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ အမျိုးသမီး ၃ ယောက်ဟာမတော်လောဘတွေကြောင့် ဖြစ်ရပ်ဆိုးတစ်ခုနဲ့ကြုံတွေ့ပြီး ရူးသွပ်ဖို့ကောင်းတဲ့တိုက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာပါတော့တယ်။ဒီအမျိုးသမီး ၃ယောက်ကြားက တိုက်ပွဲမှာ ဘယ်လိုနည်းပရိယာယ်တွေ မာယာတွေပါနေမလဲ...အဆုံးသတ်မှာ ဘယ်သူကအနိုင်ရသွားမလဲဆိုတာသိရဖို့ CMကနေတနင်္လာ-သောကြာ ငါးရက်လုံးတင်ဆက်ပေးသွားမှာမို့ တဝကြီးကြည့်ရှုအားပေးကြပါဦးနော် ။ Native Title: 황금 가면 Episodes: 100 Aired: May 23, 2022 - Oct 7, 2022 Aired ...
TMDb: 8.2/10 votes
Shooting Night Out (2022) Shooting Night Out (2022)ဒါကတော့ Healing Trip အစီအစဉ်လေးပါ။ ဘယ်လို Healing Trip လဲဆိုတော့ နာမည်ကျော် စတားတွေအတွက် ခရီးသွားရင်း အနားယူဖို့ စီစဉ်ပေးထားတဲ့ အစီအစဉ်လေးပါ။ခရီးသွားဖော်အဖြစ် ပါပေးမယ့်လူတွေကတော့- ရသစုံရှိုးတွေမှာ နာမည်ကြီးပြီး အနုပညာရှင်တော်တော်များများက ချစ်ကြတတ်တဲ့ Lee Su Geun - နာမည်ကြီး ဟာသသရုပ်ဆောင် Lee Jin Ho နဲ့ - Super Junior အဖွဲ့ဝင် အပြုံးအေးအေးလေးနဲ့ ဖမ်းစားတတ်တဲ့ Kyu Hyun တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။Su Geun က ယာဉ်မောင်း၊ Jin Ho က နောက်လိုက်အလုပ်သမား၊ Kyu Hyun က အစားအသောက်နဲ့ ဖျော်ဖြေရေးကို တာဝန်ယူကြမှာပါ။ဘယ်အနုပညာရှင်တွေနဲ့ ဘယ်လိုခရီးတွေသွားပြီး ဘာတွေ ပျော်ရဦးမလဲဆိုတာ ကြည့်လိုက်ရအောင်ပါ။အညွှန်းကိုတော့ Nan Thin က ရေးထားပေးပြီးတော့ဘာသာပြန်ထားတာကတော့ CM Variety Pro Max ...
The Good Neighbor (2022) The Good Neighbor (2022)The Tudors ထဲက King Henry VIII အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ မင်းသားကြီး Jonathan Meyers ရဲ့ ကားသစ်လေးပါ။မာ့ခ်ဆိုတဲ့ လူငယ်လေးတစ်ယောက်ဟာ စိတ်ဓာတ်ကျမှုတွေနဲ့ ကျောင်းအသစ်ကို ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ရပါတယ်။ လူတွေနဲ့ ရှောင်ဖယ်နေတတ်လို့ သူငယ်ချင်းမရှိခဲ့ဖူးတဲ့ မာ့ခ်အတွက် ရေဘက်ကာဟာ ပထမဆုံး သူငယ်ချင်း ဖြစ်လာခဲ့ရာကနေစလို့ မာ့ခ်ဟာ ရေဘက်ကာနဲ့ ပိုမိုခင်မင်နိုင်ဖို့ ရေဘက်ကာ တောင်းဆိုသမျှကို လိုက်လျောလာပါတော့တယ်။အဲဒီလိုက်လျောမှု‌တွေထဲ မာ့ခ်နဲ့ ရေဘက်ကာအပြင် နစ်ကီ၊ ခလိုးဝီ၊ ဆမ် စတဲ့ သူငယ်ချင်းအုပ်စု တစ်ခုလုံးရဲ့ ဘဝကို ပြောင်းလဲပစ်ခဲ့တဲ့ လိုက်လျောမှုတစ်ခုကတော့ နာမည်ကျော်တွေရဲ့ အိမ်ကို‌ ခိုးဝင်ဖို့ မာ့ခ်ကူညီခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။သာမန် ခေတ်လူငယ်လေးတွေဟာ နာမည်ကျော်မင်းသမီးတွေရဲ့ အိမ်ထဲက တန်ဖိုးကြီးပစ္စည်းတွေကို လိုက်လံစပ်စုကြရင်း မသိသာအောင် အနည်းငယ်စီ ခိုးယူလာတတ်ကြပါတယ်။ မာ့ခ်ဟာလည်း တဖြည်းဖြည်း သူ့ဘဝကို ရေဘက်ကာနဲ့အတူ ...
Swap Me, Baby (2022) လီလီလို့ခေါ်တဲ့ အရာရာကို သေချာစီစဉ်တတ်တဲ့ စီးပွားရေးသမား အမျိုးသမီးတစ်ယောက်က မထင်မှတ်ပဲ ပြင်သစ်လူမျိုး ယောက်ျားပိုင်းလုံး ဖီလစ်နဲ့ မထင်မှတ်ပဲ ကိုယ်ဝန်ရသွားခဲ့ပါတယ် ဗိုက်ထဲက ကလေးကို ဘယ်လိုရှေ့ဆက်ပျိုးထောင်မလဲဆိုတာ အကြံပေးအတိုင်ပင်ခံ ပညာရှင်နဲ့ သွားရောက်တိုင်ပင်တဲ့အခါမှာတော့ အကြံပေးပညာရှင်က မှော်သေတ္တာ တစ်လုံး ထုတ်ပြခဲ့ပါတယ် မှော်သေတ္တာရဲ့ စေခိုင်းချက်အတိုင်း တောထဲကအပန်းဖြေအိမ်ထဲမှာ လီလီနဲ့ ဖီလစ်တို့ တစ်ပတ်သွားရောက်နေထိုင်ရပါတယ် ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ တစ်‌ယောက်အကြောင်း တစ်ယောက်ပိုသိဖို့ နဲ့ ကလေး ဘဝရှေ့ရေးကို ဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့ပါ ဒါပေမဲ့ မထင်မှတ်ထားပဲ မှော်သေတ္တာက လီလီနဲ့ ဖီလစ်ကို ခန္ဓာကိုယ်ချင်း လဲပေးလိုက်တဲ့ အခါမှာတော့ ဘာတွေဆက်ဖြစ်မှာလဲFile size…(1.32GB)/(643MB)/(388MB) Quality….Webrip 1080p / 720p / 480p Format…mp4 Duration….02:01:00 Genre...Comedy Subtitle….Myanmar Subtitle (Hardsub) Encoder….Mr. Anderson Translated by Kevin